Ny alahady lasa teo tany Londres dia nisy hetsika iray natao, izay nanatri-maso ny mpilalao tao an-toerana, fa koa tamin'ny kintan'i Hollywood. Ny loka an-tariby Londres'ny Londres'ny Standard Evening-2016 dia ny fankalazana ny faha-62 taonany ho an'ireo nahazo ireo teatra, ary koa fampisehoana manan-danja sy malaza.
Prince William, Bloom, Hurley ary ny maro hafa
Azontsika atao ny milaza fa ny sarin'ny tarika Old Vic ao Londres tamin'ny 13 Novambra dia niparitaka tamin'ny kintana tena izy. Anisan'ireo nasaina hanomezam-boninahitra, ary koa ireo izay nanolotra ireo mari-pankasitrahana, dia ny mpanjaka britanika, Prince William. Avy amin'ny tanan'ny prince, nomena ny mpandihy britanika Rafe Fiennes, izay nahazo ny anarana hoe "Best Actor". Azony jerena ao amin'ny famokarana teatra "Richard III" sy "Builder Solne". Ankoatra izany, nanamarika i William David Attenborough, izay nahazo ny statuette "Ho fanampiana amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny teatra".
Avy eo dia naseho toy ny statuette ilay mpilalao sarimihetsika Billy Piper, izay nilalao tamin'ny famokarana ny "Yerma", tao amin'ny sokajy "Best Actress". Ilay malaza John Malkovich dia nekena ho "Tale Best" amin'ny lalao "Canary tsara". Ilay mpilalao sarimihetsika Glenn Close dia nahazo ny anarana hoe "Best Actress of the Musical" noho ny anjara asany amin'ny famokarana "Sunset Boulevard." Ny loka dia natolotr'ilay mpihira malaza Elton John azy. "Harry Potter sy ny ankizy voaozona" mifototra amin'ny tantara mitovy amin'ny anarana, Joan Rowling dia nahazo ny loka "Best Performance", sns.
Ankoatr'izay, ny mpilalao britanika fanta-daza Tom Hiddleston, kintana Hollywood Orlando Bloom, modely lamaody Dita von Teese, British actress Joan Collins, mpihira Shirley Bassey, Amerikana mpilalao sarimihetsika Ian McKellen, modely Lily Donaldson, Sunny Ozell sy Patrick Stewart dia nanomana ireo mpaka sary.
Ireo fotoana mahatsikaiky sy mahatsikaiky indrindra sy meme Internet amin'ny fampakarambadin'ny Printsy Harry sy Megan Markle!
Vidin'ny fitiavan'ny alina: Orlando Bloom voampanga ho nandravarava asa iray mihetsika
Elizabeth Hurley dia niara-niasa tamin'ny zanany niaraka tamin'ny antoko
Ankoatra ireo olo-malaza voalaza etsy ambony, nisintona ny sain'ny mpanao gazety an'i Elizabeth Hurley, 51 taona. Ilay mpilalao sarimihetsika dia tsy mitsahatra mampihetsi-po ireo mpankafy fa tsy amin'ny hatsarany fotsiny ihany, fa amin'ny akanjo lava ihany koa amin'ny fihenanam-bolo lehibe sy avo.
Tao amin'ny karipetra mena amin'ny Liona Evening Standard Awards Awards-2016 dia niseho tamin'i Damian zanany lahy izy. Hatramin'ny niseho farany teo amin'ny vahoaka, dia nihalehibe ny 14 taona. Araka ny fanamarihan'ny mpankafy marobe, dia nanjary tahaka an'i Steve Bing mpanafika rainy i Damian isan-taona, izay tsy nanaiky azy ho zanany irery.
Robert Pattinson dia nipoaka niaraka tamin'ilay mpihira Talia Barnett
Mariah Carey "niantraika tamin'ilay marary" mba hisorohana ny fitsarana
Ny zanaka lahin'i Mick Jagger fahavalo dia herintaona
Bella Hadid voavonjy tamin'ny fianjeran'i Gigi Hadid tao amin'ny fampisehoana Anna Sui
Margot Robbie nanambady mangingina ny mpandika soratra Tom Ackerly
Leonardo DiCaprio dia nihaona tamin'ny rafi-rafozan'i Lucila Sola, izay mbola tanora kokoa noho izy
Ian Somerhalder sy Nikki Reed nankalaza ny tsingerin-taonan'ny fampakarambadiny tamin'ny fomba mahazatra
Kate Middleton sy Prince William any Canada: ny andro fahadimy amin'ny fitsidihana
Azo atao ve ny manasitrana alèjy?
Tavoahangy ho an'ny garage
Biskuit amin'ny lemonade ao amin'ny oven - recipe
Fiandohan'ny fahaterahana amin'ny fahazazana
Vanillin - loza sy tombontsoa
Sakafo mangatsiaka ao anaty lafaoro - fomba nentina nandrahoana sakafo mahazatra
Miasa amin'ny fambolena azy io: lisitry ny karazana "matavy"
Swimming pool mandritra ny fitondrana vohoka
Fanafody antiviralan'ny herpes
Platform shoes 2016
Ahoana ny tsy hitsaharanao amin'ny olona?
Kara Dellevin: "Ny tsy fahampian'ny olombelona no maha-izy azy!"
Poti-kazo eo ambanin'ny vato